MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward DaVo Package MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
DaVo ပက်ကေ့ချ်ဆိုတာ ဘာလဲ?
မြန်နှုန်းမြင့် ဒေတာ နှင့် စိတ်ကြိုက်ဖုန်းအားလုံးခေါ် ဆိုခြင်းတွေကို ပက်ကေ့ချ် တစ်ခုထဲမှာ ရယူသုံးစွဲလိုသူများအတွက် MPTမှ DaVo ပက်ကေ့ချ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။
ဒီပက်ကေ့ချ်လေးမှာ package တန်ဖိုးရဲ့ ၂ဆပမာဏ တန်ဖိုးရှိ Data နှင့် Any-net voice minutes ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် အသုံးပြုနိုင်မည့် 1GB နှင့် မည်သည့် operator ကိုမဆိုခေါ် ဆိုရန် ၁၅ မိနစ် ပါဝင်သည့် ၇ရက်သုံး (သို့) ၃၀ရက်သုံး DaVo pack တွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
DaVo Package ၉၉၉၅ ကျပ် ဒေတာ- 30 GB
ဒေတာ-7GB
(မည်သည့်operators ကိုမဆိုဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်) ၇ရက်
MPT4U မှတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူရန် နှိပ်ပါ။
၁။ ဆွေ/ရှယ်/ရွှေ အစီအစဉ် ရယူထားသော MPT GSM/WCDMA prepaid၊ Postpaid စနစ် (လက်ရှိ) ဖုန်းအသုံးပြုသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။၂။ CDMA, Base Tariff နှင့် လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။၃။ သုံးစွဲသူများသည် ကြိုက်နှစ်သက်ရာနည်းလမ်းမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူအသုံးနိုင်ပါသည်။
၄။ ရက်၃၀သုံး 30GB + MPT-Any-net ၄၅၀မိနစ် ပက်ကေ့ချ် နှင့် ၇ရက်သုံး 7GB + MPT-Any-net ၁၀၅ မိနစ် ပက်ကေ့ချ်မှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပက်ကေ့ချ်ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး တစ်ရက်လျှင် 1GB နှင့် နှင့် မည်သည့် Operatorsကို မဆို ခေါ် ဆိုရန် ၁၅ မိနစ် ကို နေ့စဉ် သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
၅။ DaVo ပက်ကေ့ချ် ဝယ်ယူရုံနှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် သုံးစွဲနိုင်သလို ပြည်တွင်းမည်သည့်ဖုန်းလိုင်းကိုမဆို အသက်သာဆုံးနှုန်းထားဖြင့် စိတ်ကြိုက်ခေါ် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ [Special / Premium / Call Center / VAS related numbers မပါဝင်ပါ]
၆။ နေ့စဉ်သုံး 1GB+15 any-net voice min ကို (23:59:59)နာရီ မတိုင်ခင်သုံးစွဲပြီးပါက internet နှင့် phone calls သုံးစွဲခြင်းများ ဆက်လက် ရှိပါက ဝယ်ယူထားသော အခြား data/voice pack မှအရင်ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။ data/voice pack များ ဝယ်ယူထားခြင်းမရှိလျှင် သက်သာသောနှုန်းထား 1MB လျှင် ၁ကျပ်နှုန်း(အခွန်မပါ)၊ တစ်မိနစ်လျှင် ၁၅ကျပ်နှုန်း(အခွန်မပါ) ဖြင့် ဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်ပြီး ဖုန်းဘေလ် (သို့) အခြား bonus (FRC bonus, SRC Bonus, Top-up Bonus, etc,..) မှ ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ Carried over function မပါရှိပါ။ DaVo pack တွင် နေ့စဉ်ရရှိမည့် data နှင့် voice minutes များမှာ နေ့စဉ် (23:59:59)နာရီတွင် ကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိနေသည့် data နှင့် voice minutes များကို သယ်ယူအသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။
၈။ ပက်ကေ့ချ်များ၏သက်တမ်းမှာ (၃၀) ရက်/ (၇) ရက် ဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ် ခံစားခွင့်သက်တမ်းမှာ 23:59:59 နာရီတွင် နေ့စဉ်ကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်သည်။
၉။ ပက်ကေ့ချ် ကို အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိဝယ်ယူနိုင်ပြီး ပထမ ပက်ကေ့ချ်၏ သက်တမ်းမကုန်ခင် တူညီသော/မတူညီသော ပက်ကေ့ချ်ထပ်မံဝယ်ယူပါက ပက်ကေ့ချ်များ၏ နေ့စဉ်ရရှိမည့် ပမာဏအချင်းချင်း မပေါင်းစည်းပါ။
၁၀။ တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလိုပါက MPT4U app (သို့) *995# မှတစ်ဆင့် အမှတ်စဉ် “2”. Gift/ 2. လက်ဆောင်ပေးမည်” ကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးမည့် ဖုန်းနံပါတ် ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၁၁။ *224# သို့ဖုန်းခေါ်ဆို၍လည်းကောင်း(သို့) MPT4U App မှတဆင့် လည်းကောင်း ပက်ကေ့ချ် ရဲ့ သက်တမ်း ကို စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။
၁၂။ မည်သည့် ပက်ကေ့ချ် ဝယ်ဝယ် ထိပေါက် chance ၁ခု ရရှိမှာဖြစ်သည်။
၁၃။ ပရိုမိုးရှင်းကာလသည် ၂၀၂၁ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၉)ရက်နေ့မှ ထပ်မံမကြေညာခင်အချိန်အထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။
၁။DaVo ပက်ကေ့ချ်ဆိုတာ ဘာလဲ?
မြန်နှုန်းမြင့် ဒေတာ နှင့် စိတ်ကြိုက်ဖုန်းအားလုံးခေါ် ဆိုခြင်းတွေကို ပက်ကေ့ချ် တစ်ခုထဲမှာ ရယူသုံးစွဲလိုသူများအတွက် MPTမှ DaVo ပက်ကေ့ချ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ DaVo ပက်ကေ့ချ် ဝယ်ယူရုံနှင့် package တန်ဖိုး၏ ၂ဆပမာဏ တန်ဖိုးရှိ Data နှင့် Any-net voice minutes ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်မည့် 1GB နှင့် မည်သည့် operator ကိုမဆိုခေါ် ဆိုရန် ၁၅ မိနစ် ပါဝင်သည့် ၇ရက်သုံး (သို့) ၃၀ရက်သုံး DaVo pack တွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
(မည်သည့်operators ကိုမဆိုဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်) ၁ ရက်
(expire at 23:59:59) ၃၀ရက် *995#,
MPT မှ ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကား အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA prepaid/postpaid စနစ်/ လက်ရှိ အသုံးပြုနေသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ CDMA, Base Tariff နှင့် လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၄။ DaVo pack နဲ့ ဘာတွေသုံးလို့ရမလဲ?
DaVo Pack ကို Facebook (social media), Youtube (streaming), Games များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် ကန့်သတ်ချက်မရှိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းပြော မိနစ်များကို မည်သည့်operators ကိုမဆိုဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း [Special / Premium / Call Center / VAS related numbers မပါဝင်ပါ] အတွက် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ပမာဏဘယ်လောက်ရရှိမှာလဲ။
ရက်၃၀သုံး 30GB + MPT-Any call ၄၅၀မိနစ် ပါဝင်သည့် DaVo ပက်ကေ့ချ် နှင့် ၇ရက်သုံး 7GB + MPT-Any call ၁၀၅ မိနစ် ပါဝင်သည့် DaVo ပက်ကေ့ချ် ဆိုပြီး ပက်ကေ့ချ် (၂)မျိုး ရှိပါသည်။
မည်သည့် ပက်ကေ့ချ် ဝယ်ဝယ် နေ့စဉ်သုံး 1GB နှင့် မည်သည့် Operatorsကို မဆို ခေါ် ဆိုရန် ၁၅ မိနစ် ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး နေ့စဉ် (23:59:59) နာရီတွင် ကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်သည်။ နောက်နေ့ အတွက် ထပ်မံရရှိမည့် ပမာဏ 1GB+15 any-net voice minutes ကို (00:00:00) နာရီတွင် စတင်သုံးစွဲနိုင်ပြီး နေ့စဉ်သုံးပမာဏတွေ ကို ဝယ်ယူထားသော ပက်ကေ့ချ် များ၏ သက်တမ်းမကုန်မချင်း အသုံးပြုနိုင် ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသည့် နေ့စဉ်သုံး Data နှင့် voice minutes များကို သယ်ယူအသုံးပြု လို့မရနိုင်ပါ။
၆။ DaVo pack များဝယ်ယူပြီး ထိပေါက်အစီအစဉ် တွင်ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်။ မည်သည့် channel မှ မဆို ဝယ်ယူပါက ထိပေါက် chance ၁ခု ရရှိမှာဖြစ်ပြီး MPT4U တွင် data ဆုများကံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၇။ Any-net mins pack တစ်ခုဝယ်ထားပြီး DaVo Pack ကိုလည်းဝယ်ထားပါတယ်။ MPT-Any operator ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက မည်သည့် pack မှကျသင့်မှာပါလဲ?
Any-net mins pack နှင့် DaVo Pack နှစ်ခုစလုံးဝယ်ယူထားပြီး MPTမှ အခြား operator ကို ဖုန်းခေါ် ဆိုပါက DaVo pack မှ အရင် ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၈။ နေ့စဉ်သုံး data နှင့် any-net voice min သုံးစွဲပြီးပါက ဘယ်လိုသက်သာသောနှုန်းထားဖြင့် ကျသင့်မှာပါလဲ?
သုံးစွဲသူများသည် DaVo pack မှ နေ့စဉ် သုံး 1GB+15 any-net voice min သုံးစွဲပြီးပါက အခြား data/voice pack များ ဝယ်ယူထားခြင်းမရှိလျှင် data နှင့် voice ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းအတွက်
1MB လျှင် ၁ကျပ်နှုန်း(အခွန်မပါ) ၊ တစ်မိနစ်လျှင် ၁၅ကျပ်နှုန်း(အခွန်မပါ) သက်သာသောနှုန်းထားဖြင့် ဖုန်းဘေလ် (သို့) အခြား bonus (FRC bonus, SRC Bonus, Top-up Bonus, etc,..) မှကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန် ၁၀၀၀ကျပ်, DaVo pack နဲ့ Data Carry Plus pack ရှိနေပါတယ် ဒေတာသုံးစွဲမှုအတွက် ဘယ်လိုနှုန်းထားဖြင့် ကျသင့်မှာပါလဲ?
သုံးစွဲသူများသည် ဒေတာသုံးစွဲမှုအတွက် DaVo pack မှ နေ့စဉ်သုံး 1GB အရင်သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ 1GB ကုန်ဆုံးပါက Data Carry Plus pack ကိုဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး pack data ကုန်ဆုံးပါက 1MB လျှင် ၁ကျပ်နှုန်း(အခွန်မပါ) ဖြင့် ဖုန်းဘေလ်မှကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ DaVo pack နဲ့ စုံစုံလင်လင် pack ရှိနေပါတယ်။ FB/ IG / Viber / Joox/ MLBB သုံးစွဲပါကဘယ်လိုနှုန်းထားဖြင့် ကျသင့်မှာပါလဲ?
သုံးစွဲသူများသည် DaVo နှင့် စုံစုံလင်လင် ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူထားပါက FB/ IG / Viber / Joox/ MLBB သုံးစွဲမှုအတွက် DaVo packမှ ကောက်ခံခြင်းမရှိပါ။ အခြားသော data သုံးစွဲပါက DaVo pack နေ့စဉ် သုံး 1GB မှ ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး 1GB ကုန်ဆုံးပါက စုံစုံလင်လင် pack မှ ဒေတာ 2GB ကိုဆက်လက် အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ 2GB data ကုန်ဆုံးပါက 1MB လျှင် ၁ကျပ်နှုန်း(အခွန်မပါ) ဖြင့် ဖုန်းဘေလ်မှ ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန် ၁၀၀၀ကျပ်, စုံစုံလင်လင် pack မှ ၁၀၀၀ကျပ်(စုစုပေါင်းဖုန်းဘေလ် ၂၀၀၀ကျပ်) နဲ့ DaVo pack ရှိနေပါတယ်။ MPTဖုန်းအချင်းချင်း/ အခြားဖုန်းလိုင်း ခေါ်ဆိုပါက ဘယ်လိုနှုန်းထားဖြင့် ကျသင့်မှာပါလဲ?
သုံးစွဲသူများသည် DaVo pack မှ မည်သည့်ဖုန်းလိုင်းမဆိုခေါ် ဆိုရန် 15 min ကို အရင်သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီး 15 min ကုန်ဆုံးပါက စုံစုံလင်လင် pack၏ ၁၀၀၀ကျပ် ဖုန်းဘေလ်မှ MPT-MPT ခေါ် ဆိုလျှင် ၁မိနစ်လျှင် ၁၀ကျပ် (or) အခြား Operator ခေါ် ဆိုလျှင် ၁မိနစ်လျှင် ၁၅ကျပ် ကျသင့်မှာပါ။ အခြားပက်ကေ့ချ်များဝယ်ယူထားခြင်းမရှိပါက တစ်မိနစ်လျှင် ၁၅ကျပ်နှုန်းဖြင့် ဖုန်းဘေလ်မှကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၂။ လက်ကျန်ပမာဏကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မှာလဲ?
အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ပက်ကေ့ချ် နေ့စဉ်သုံး data နှင့် voice minutes များ မပေါင်းစည်းပါ။
ရပါတယ်။ တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလိုပါက MPT4U app (သို့) *995# မှတစ်ဆင့် အမှတ်စဉ် “2. Gift/ 2. လက်ဆောင်ပေးမည်” ကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးမည့် ဖုန်းနံပါတ် ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၂၁ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၉)ရက်နေ့မှ ထပ်မံမကြေညာခင်အချိန်အထိ ဖြစ်ပါတယ်။